Serivisy ho an'ny tenany sy ny milina fikarohana | Martech Zone
Fomba iray hanatsarana ny fihazonana ny mpanjifa sy ny fahafaham-pon'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny ny famokarana atiny manampy ny mpanjifa manampy ny tenany. Tsy vitan'ny fanatsarana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa fotsiny, fa misy tahiry mivantana mifandraika amin'ny mpanjifa tsy mamatotra ny làlan'ny serivisy ho an'ny mpanjifanao. Ny famoahana ny loharanom-pahalalanao, ny fanontaniana napetraka matetika, ny sombintsombiny ary ny ohatra izay ahitan'ny motera fikarohana azy ireo dia ahafahana manao izany - tsy mametraka azy ireo ao ambadiky ny fidirana noho ny tahotra sao hahita azy ireo ny mpifaninana.
Ny fandalinana tato ho ato dia milaza amintsika fa mihamaro ny mpanjifa maniry ny fanompoana azy fa tsy mifandray amin'ny mpanohana; ary araka ny asehon'ity sary eto ambany eto ambany ity dia 91% no milaza fa hampiasa tobim-pahalalana izy ireo raha toa ka mifanaraka amin'ny filan'izy ireo izany. Vaovao tsara ho an'ny orinasa izany; ny fanompoana tena no fomba haingana sy mahomby indrindra hanohanana ny mpanjifa. Ny fanatsarana ny infografika an'i Zendesk ao Mitadiava Serivisy Manokana Manan-tsaina
Tags: Customer satisfactionSerivisy ho an'ny mpanjifaFAQssamy mikarakara ny tenany
12 Novambra 2012 à 3:23
Zavatra mahafinaritra ity! Fihetseham-po haingana avy amin'ny lehilahy iray mitantana fahalalana sy miantoka ny fivelomana:
1. Somary mahatsikaiky ihany fa ny Oracle dia voatonona ao amin'ny fizarana momba ny SEO sy ny fizarana ny votoatinao amin'ny alàlan'ny milina fikarohana amin'ny Internet, satria izy ireo dia ohatra miavaka amin'ny orinasa B2B izay TSY mizara votoaty fototry ny fahalalana amin'ny alàlan'ny Google et al. Na tsara na ratsy, manidy ny atiny KB ao ambadiky ny fidirany
2. Tena hafa mihitsy ny angonako — ambany lavitra — noho ny “40% no hiantso ivom-pifandraisan-davitra aorian'ny fanompoana tena”. Raha mieritreritra ny traikefanao B2C manokana ianao amin'ny Amazon, Microsoft, sns., dia hitanao fa ambony loatra izany. Saingy na amin'ny tontolo B2B aza, ny volume ao amin'ny tranokala dia 10x - 30x ny volume ao amin'ny foibe fanohanana, na mihoatra.
3. Heveriko fa diso i Gartner momba ireo mpandraharaha virtoaly. (70% mety) 🙂
12 Novambra 2012 à 4:17
Taorian'ny fanavaozam-baovaon'i Penguin&Panda dia mpanjaka. Ny famoahana ny fototry ny fahalalanao dia azo antoka fa hampitombo ny SEO anao